पुँजीबजारमा सुधार देखिएकै हो त ? «
पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लागिरहेको सेयर बजारमा केहि सुधारको संकेत देखिएको छ । नेप्से केही बढेको छ भने कारोबार रकममा पनि केही सुधार भएको देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताहरूलाई केही राहत मिलेको छ । निरन्तर घटिरहेको बजारमा नेप्से केहि बढेकाले सेयर बजारमा सुधारको संकेत देखिएको आशा गर्न सकिन्छ ।
तर पनि लगानीकर्ताहरू भने सुनिश्चित हुन सकिरहेका छैनन्, यो उकालो टिक्ने हो कि होइन भनेर । जुन तरिकाले बजार बढेको र कारोबार रकम बढेको थियो, त्यहि ढैडले फेरि बजार सुधार हुने संकेत देखिएको हुन सक्छ । त्यसो त अहिलेको समय भनेको सेयर बजार बढ्ने नै समय हो । कम्पनीहरूले धमाधम लाभांशहरूको घोषणा गरिरहेका छन् ।
लाभांश घोषणा गरेका कम्पनीहरूको लाभांश पनि गत सालको भन्दा केही बढी नै भएको देखिन्छ । यस कारणले पनि अबको दिनमा सेयर बजारले गति लिने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागेका कारणले सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू बाहिरिएको भन्ने पनि चर्चा चलेको थियो ।
त्यसो त पछिल्लो समयमा सेयर बजार खस्किँदो अवस्थामा थियो भन्दा पनि फरक नहोला । सेयर बजारप्रति लगानीकर्ताहरूको आकर्षण कम भएजस्तो पनि देखिएको थियो । निषेधाज्ञाको समयमा दिनमै २१ अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको थियो भने नेप्से ३२ सय अंक पार गरेको थियो । तर, पछिल्लो समयमा सेयर बजार निरन्तर घटेको थियो ।
नेप्से निरन्तर ओरालो लगिरहेका कारण लगानीकर्ताहरू आत्तिनु, डराउनु स्वाभाविक पनि हो । सेयर बजारमा नेप्से घट्ने÷बढ्ने क्रम भइरहने हो, तर पनि पछिल्लो समयमा नेप्से लगातार घटिरहेका कारण नेप्से फेरि घट्ला कि भन्ने डरले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न डराइरहेका थिए । कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताहरूले नाफा नै खोज्छन्, घाटा खानका लागि लगानी गर्दैनन् । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले पनि नाफा नै खोज्छन् । त्यसो त सेयर बजार सधैं घट्ने र सधैं बढ्ने गर्दैन । नेप्से घटेपछि बढ्छ पनि । लगानीकर्ताहरू डराउनु, आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन । लगानीकर्ताहरूमा धैर्य गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ ।
सेयर बजारका कतिपय लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञानलाई नियाल्ने हो भने धेरैजसो लगानीकर्ताले बजार बढेको बेला, नेप्से उकालो लागेको बेला लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । निषेधाज्ञामा भएको कारोबारले पनि यस्तै देखाएको थियो । नेप्से बढेको समयमा भोलि पनि बढ्छ कि भनेर लगानी गर्ने गरेको हुन्छन् लगानीकर्ताहरूले ।
कतिपय लगानीकर्ता भने घटेको बेला लगानी नगरेको बताउँछन् । तर, कतिपय नेप्से घटेको बेला सेयरमा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । यदि घटेको बेला फेरि घट्छ कि भनेर लगानी नगर्ने हो भने घटेको बजार कसरी बढ्छ । सेयर बजार उकालो लाग्नका लागि सेयर किन्ने लगानीकर्ताहरूको लर्को पनि त हुनुप¥यो ।
कतिपय सेयर बजारका ठूला व्यापारीहरूले नेप्से घटेको बेला सेयरहरू उठाउने पनि गरेका छन् । कतिपय लगानीकर्ताहरूको भनाइमा घटेको बेला सेयर किन्ने कतिपय ठूलाबडा लगानीकर्ताहरू, जसले सेयर बजारलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने क्षमता राख्छन्, त्यस्ता लगानीकर्ताहरूले सेयर उठाउने गर्दछन् । केही ठूलाबडा सेयर बजारका माहिर खेलाडीहरूले सेयर बजारलाई आफूअनुकूल बनाउन चलखेल पनि गर्ने गरेको भेटिन्छ । त्यसैले होल्ड गर्ने क्षमता भएका लगानीकर्ताहरूलाई नेप्से घटेको बेला सेयर खरिद गर्न, लगानी गर्न फाइदाजनक हुने देखिन्छ ।
बजार घटेको बेला लगानीकर्ताको हारगुहार हुन्छ ।
यसका कारणहरू खोतल्न थाल्छन् । नियमन निकायहरूलाई दोष दिन थाल्छन् । कतिपय अवस्थामा विभिन्न कारणहरूले सेयर बजारमा असर गर्ने गरेका छन् । यसमा राजनीति, सरकार, कतिपय अवस्थामा सेयर बजारका नियमन निकायका नीतिनियम, तरलता आदि कारणहरूले पनि सेयर बजारमा असर गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा निरन्तर सेयर बजार ओरालो लाग्नुको कारणमा कतिपयले नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको सेयर कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमालाई मानेका छन् भने कतिपयले अर्थमन्त्रीको हावा भरेर फुलेको बेलुन भन्ने भनाइलाई पनि मानेका छन् ।
सेयर बजार उकालो लाग्ने, ओरालो लाग्नेमा विविध कारणहरू हुन्छन् । अर्थमन्त्रीको भनाइ, नियामक निकायको नीतिनियम, बैंकहरूको ब्याजदर, तरलता आदिले पनि सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने गरेको पनि हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा लगानीकर्ताहरू पनि हेर र पर्खको अवस्थामा रहेका छन् । तर, यो कहिलेसम्म रहने त ? सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमा आत्मबल बलियो हुनुपर्ने, सेयरमा लगानी गर्दा सचेत, सजग भएर लगानी गर्नुपर्ने, अरूको देखासिकी नगरी हल्लाको पछि नलागी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३२ बिन्दु पार गरिसकेको नेप्से २५ सय बिन्दुको हाराहारीमा आएका कारण नियामक निकायहरूले ध्यान नदिएको भन्दै गाली गर्ने पनि छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ४ करोड र १२ करोडको सीमालाई हटाउनुपर्छ भनेर १८ बुँदे माग राखेर केही सेयर लगानीकर्ताहरूले आन्दोलनसमेत गरे ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजार निरन्तर ओरालो लगिरहेका कारण लगानीकर्ताहरू डराए, हराए, लगानीकर्ताहरू सेयर बजारबाट बाहिरिए भनेर पनि चर्चा नचलेको होइन भने कतिपयले बजार घटाउन चलखेल गरेको भनेर पनि भन्ने गरेका छन् ।
तर बजार ओरालो लागेको भन्दैमा लगानीकर्ताहरू बजारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था भने छैन । सेयर बजार घटेपछि बढ्छ पनि, सेयर बजारमा नेप्से घटबढ भइ नै रहन्छ । तर, सेयर बजारमा नयाँ प्रवेश गरेका लगानीकर्ताहरू भने आत्तिने गरेका छन् । बजार घटेपछि फेरि घट्छ कि भनेर घाटामा भए पनि सेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिने पनि हुन्छन् ।
अहिलेको अवस्थामा सेयर बजारका छोटो अवधिका लगानीकर्ताहरूलाई केही बेफाइदाजस्तो देखिए पनि लामो अवधिका होल्डमा बस्ने लगानीकर्ताहरूको लागि भने फाइदा जनक नै देखिन्छ । अहिलेको समय भनेको बाली खाने समय हो भन्दा पनि फरक नपर्ला । अहिले कम्पनीहरूले धमाधम लाभांश वितरण गर्ने समय हो । त्यसो त सेयर बजार भनेको नै जोखिमको व्यवसाय हो । यसमा जेखिम पनि बढी हुन्छ र फाइदा पनि बढी नै हुन्छ । एउटा भनाइ छ नि, नो रिक्स नो गेन ।